”စီးပှားတကျခငျြရငျ လငျနဲ့မယားရနျမဖွဈကွဖို့လိုတယျ” - Shwe Khit
” အရမျးကောငျးလိုကျတဲ့ စာလေးဗြာ။ ပိုငျအိုးနီးယား စားသောကျဆိုငျ ပိုငျရှငျ ကိုဇျောမိုးပွောပွတဲ့ အိမျတဈအိမျ စီးပှားတကျဖို့ ယတွာခနြေဖေို့ မလိုဘူးဆိုတဲ့ စကား အရမျးမိုကျတယျဗြာ၊ ဖတျကွညျ့ပါ
စီးပှားတကျခငျြရငျ လငျနဲ့မယား ရနျမဖွဈကွဖို့လိုတယျ။ ဘာဖွဈလို့ ရနျဖွဈရငျ စီးပှားမတကျတာလဲ။ရနျဖွဈပွီဆိုတာနဲ့ဝစီဒုစရိုကျမနောဒုစရိုကျမှုတှကြေူးလှနျမိတော့တာကိုး။ လငျနဲ့မယား ရနျမဖွဈတဲ့အခြိနျက နက်ခတျကောငျးတဲ့အခြိနျပါပဲ။နက်ခတျကောငျးရငျ စီးပှားတကျမှာပဲ။ နက်ခတျကောငျးဖို့ ယတွာခနြေဖေို့ မလိုဘူး။ လငျနဲ့မယား ရနျမဖွဈဖို့ပဲ လိုတယျ။
လူဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အကောငျးခညျြးပဲထငျနတေတျကွတယျ။ ပုထုဇဉျတှပေဲဆိုတော့ အကောငျးခညျြးပဲဆိုတာတော့ဖွဈမလာဘူး။လငျမယားဆိုတာ ကောငျးတိုငျပငျ ဆိုးတိုငျပငျရှိရမယျ။ တဈယောကျကို တဈယောကျ အပွဈမမွငျ..အပွဈမတငျရဘူး။
တဈယောကျကိုတဈယောကျ မတ်ေတာရှထေ့ားပွီးတော့ အပွုသဘောဆောငျပွီးသတိပေးကွရမယျ။လငျနှငျ့မယားရနျဖွဈငွားစီးပှားပကျြမညျသာ။
ဒါကတော့ မိုးသု -(မန်တလေး) က စီးပှားတကျဖို့အတှကျရနျမဖွဈမိကွဖို့အိမျထောငျသညျတှကေိုသတိပေးထားတာလေးပေါ့။အိမျထောငျတဈခု စီးပှားတကျဖို့ဆိုရငျ…မှနျပါတယျ မိုးသု ရှငျးပွထားသလို လငျမယားတှရေနျသတျနလေို့မဖွဈပါဘူး။
ဒါဟာလညျး စီးပှားဖွဈခွငျး၊မဖွဈခွငျးထကျ နံပါတျ(၁)အခကျြကတော့ အမွဲ ရနျသတျနတေဲ့ အိမျက သာယာတဲ့ စိတျခမျြးသာမှု မရတာတော့အမှနျပဲ။
ကြှနျတျော ဝနျထမျးအိမျထောငျသညျ စုံတှဲကလေးတှေ တဈရကျခွား ရနျဖွဈကွတယျ။ ရနျဖွဈတိုငျးချေါဆုံးမရတာက အလုပျတဈလုပျ။
တခြို့ကွတော့ ရနျဖွဈပွီဆို အလုပျပကျြ၊အလုပျခန၊ခနပကျြရငျ ကွာတော့ အလုပျထုတျရတော့တာပေါ့(ဒါလညျးစီးပှားပကျြခွငျးတမြိုးပဲ)..။
တခြို့ ခဈြခဈြခငျခငျနတေဲ့ အိမျထောငျသညျစုံတှဲတှကွေပွနျတော့၊ လငျအလုပျ မယားကကူ၊မယားအလုပျလငျကကူနဲ့ သူတို့လေးတှကွေပွနျတော့ ရှတှေဲလှဲငှတှေဲလှဲနဲ့ပေါ့။
ဒါက ဝနျထမျးအိမျထောငျသညျတှနေဲ့ဥပမာနှိုငျးပွတာ။ကြှနျတျော တို့လငျမယား နှဈယောကျအပျေါ ဝနျထမျးကလေးတှေ ပဟဠေိ ဖွဈနတေဲ့အခကျြတဈခုရှိတယျ၊
အဲဒါက ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျ ရနျဖွဈတာမတှကွေ့လို့တဲ့ဗြ။အိမျထောငျသညျဝနျထမျးတှကေော၊အိမျထောငျမသညျသေးတဲ့ဝနျထမျးလေးတှကေောပေါ့….
သူတို့ကငျြလညျလာတဲ့ပတျဝနျးကငျြ၊သူတို့မိဘတှေ ရနျခနခနဖွဈကွတယျတဲ့၊တညျ့တဲ့အခြိနျကနဲတယျ၊ကိုကိုကွီးနဲ့မမ ကွတော့ရနျဖွဈတာ တဈခါမှမတှဘေူ့းဆိုပွီးလာမေးကွတဲ့အထိပေါ့….
ရနျဖွဈဖို့ယူတာမှမဟုတျတာ။ရညျးစားဘဝမှာ ဘယျလောကျပဲအလိုလိုကျလိုကျ၊ဘယျလောကျပဲခဈြခဈြ၊တခြို့တခြို့တှအေိမျထောငျကွပွီးနောကျပိုငျး လကျပါလာကွတယျ။အလှနျအမငျးရိုကျနကျကွတဲ့သူတှလေညျးရှိတယျ။
သူတို့တှကေို တှတေ့ော့ ရညျစားဘဝတုနျးက ဘယျလိုမြား ခဈြစကားပွောလာကွလညျးဆိုတာအရမျးသိခငျြမိတယျ။မိနျးခလေးဘကျကလညျး ဘယျလောကျထိ အိုကျတငျခံပွီးမှ အဖွပေေးသလဲဆိုတာသိခငျြမိတယျ။
ကြှနျတျောတုနျးက ခကျခကျခဲခဲခဈြခှငျ့ပနျခဲ့ရတယျ၊အခကျအခဲတှအေမြားကွီးကွုံတှခေဲ့ရတယျ၊ဒီလိုခကျခဲစှာရယူလာခဲ့ရတဲ့အခဈြကို တနျဖိုးထားတယျ၊မွတျနိုးတယျ။
တကယျတော့ လငျမယားဆိုတာ အရငျးနီးဆုံးမိတျဆှတှေလေေ၊ထိလြှလှယျတယျ။ရနျမဖွဈမိအောငျအတတျနိုငျဆုံးဖွလြေော့တတျရမယျ။
နားလညျမှုဆိုတာ ဆငျးရဲတာ၊ခမျြးသာတာနဲ့မဆိုငျဘူးနျော။နောကျတဈခကျြက ငါဆိုတဲ့ အတ်တစှဲတှလြော့ခပြဈရမယျ။
လူပဲအခနျ့မသငျ့ရငျ စိတျတော့တိုတတျကွတာပေါ့။စိတျတိုတိုငျးလညျးပေါကျကှဲပွဈလို့မရဘူး၊ပေါကျကှဲမှုပွငျးရငျပွငျးသလို အပိုငျးအဆတှကေ လှငျ့စငျထှကျသှားတတျကွတယျ၊
နဂိုအတိုငျးပွနျဖွဈဖို့လှငျ့သှားတဲ့ စိတျဒဏျရာ အပိုငျးအဆတှကေိုပွနျဆကျရတာမလှယျဘူးလေ။ဒီတော့ ဒေါသရဲ့ပေါကျကှဲမှုအားကို နညျးနိုငျသလောကျနညျးအောငျ ပထမအဆငျ့လြော့ခနြိုငျရမယျ။
မဖွဈနိုငျတာမရှိပါဘူး၊ခငျဗြားတို့ရဲ့ ထဈကတညျးနရေငျ ထှကျတတျတဲ့ဒေါသအကငျြ့ကလေးကို ဖွေးဖွေးခငျြးလြော့ခကြွညျ့ပါ။လငျမယားတှရေနျဖွဈတာ နညျးလာလေ၊
ပတျဝနျးကငျြက ကိုယျ့ကိုလေးစားအထငျကွီးလာလပေါပဲ၊စိတျခမျြးသာမှုအမွဲရနရေငျ အလုပျလုပျရတာလညျး အဆငျပွလောမယျ၊စီးပှားလညျးသူ့အလိုလိုဖွဈလာတာပေါ့။
” အရမ်းကောင်းလိုက်တဲ့ စာလေးဗျာ။ ပိုင်အိုးနီးယား စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင် ကိုဇော်မိုးပြောပြတဲ့ အိမ်တစ်အိမ် စီးပွားတက်ဖို့ ယတြာချေနေဖို့ မလိုဘူးဆိုတဲ့ စကား အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ၊ ဖတ်ကြည့်ပါ
စီးပွားတက်ချင်ရင် လင်နဲ့မယား ရန်မဖြစ်ကြဖို့လိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ရန်ဖြစ်ရင် စီးပွားမတက်တာလဲ။
ရန်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်မှုတွေကျူးလွန်မိတော့တာကိုး။ လင်နဲ့မယား ရန်မဖြစ်တဲ့အချိန်က နက္ခတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ပါပဲ။
နက္ခတ်ကောင်းရင် စီးပွားတက်မှာပဲ။ နက္ခတ်ကောင်းဖို့ ယတြာချေနေဖို့ မလိုဘူး။ လင်နဲ့မယား ရန်မဖြစ်ဖို့ပဲ လိုတယ်။
လူဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အကောင်းချည်းပဲထင်နေတတ်ကြတယ်။ ပုထုဇဉ်တွေပဲဆိုတော့ အကောင်းချည်းပဲဆိုတာတော့ဖြစ်မလာဘူး။
လင်မယားဆိုတာ ကောင်းတိုင်ပင် ဆိုးတိုင်ပင်ရှိရမယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြစ်မမြင်..အပြစ်မတင်ရဘူး။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မေတ္တာရှေ့ထားပြီးတော့ အပြုသဘောဆောင်ပြီးသတိပေးကြရမယ်။လင်နှင့်မယားရန်ဖြစ်ငြားစီးပွားပျက်မည်သာ။
ဒါကတော့ မိုးသု -(မန္တလေး) က စီးပွားတက်ဖို့အတွက်ရန်မဖြစ်မိကြဖို့အိမ်ထောင်သည်တွေကိုသတိပေးထားတာလေးပေါ့။
အိမ်ထောင်တစ်ခု စီးပွားတက်ဖို့ဆိုရင်…မှန်ပါတယ် မိုးသု ရှင်းပြထားသလို လင်မယားတွေရန်သတ်နေလို့မဖြစ်ပါဘူး။
ဒါဟာလည်း စီးပွားဖြစ်ခြင်း၊မဖြစ်ခြင်းထက် နံပါတ်(၁)အချက်ကတော့ အမြဲ ရန်သတ်နေတဲ့ အိမ်က သာယာတဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု မရတာတော့အမှန်ပဲ။
ကျွန်တော် ဝန်ထမ်းအိမ်ထောင်သည် စုံတွဲကလေးတွေ တစ်ရက်ခြား ရန်ဖြစ်ကြတယ်။ ရန်ဖြစ်တိုင်းခေါ်ဆုံးမရတာက အလုပ်တစ်လုပ်။
တချို့ကြတော့ ရန်ဖြစ်ပြီဆို အလုပ်ပျက်၊အလုပ်ခန၊ခနပျက်ရင် ကြာတော့ အလုပ်ထုတ်ရတော့တာပေါ့(ဒါလည်းစီးပွားပျက်ခြင်းတမျိုးပဲ)..။
တချို့ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတဲ့ အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲတွေကြပြန်တော့၊ လင်အလုပ် မယားကကူ၊မယားအလုပ်လင်ကကူနဲ့ သူတို့လေးတွေကြပြန်တော့ ရွှေတွဲလွဲငွေတွဲလွဲနဲ့ပေါ့။
ဒါက ဝန်ထမ်းအိမ်ထောင်သည်တွေနဲ့ဥပမာနှိုင်းပြတာ။ကျွန်တော် တို့လင်မယား နှစ်ယောက်အပေါ် ဝန်ထမ်းကလေးတွေ ပဟေဠိ ဖြစ်နေတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်၊
အဲဒါက ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်တာမတွေ့ကြလို့တဲ့ဗျ။အိမ်ထောင်သည်ဝန်ထမ်းတွေကော၊အိမ်ထောင်မသည်သေးတဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေကောပေါ့….
သူတို့ကျင်လည်လာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၊သူတို့မိဘတွေ ရန်ခနခနဖြစ်ကြတယ်တဲ့၊တည့်တဲ့အချိန်ကနဲတယ်၊ကိုကိုကြီးနဲ့မမ ကြတော့ရန်ဖြစ်တာ တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဆိုပြီးလာမေးကြတဲ့အထိပေါ့….
ရန်ဖြစ်ဖို့ယူတာမှမဟုတ်တာ။ရည်းစားဘဝမှာ ဘယ်လောက်ပဲအလိုလိုက်လိုက်၊ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်၊တချို့တချို့တွေအိမ်ထောင်ကြပြီးနောက်ပိုင်း လက်ပါလာကြတယ်။အလွန်အမင်းရိုက်နက်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။
သူတို့တွေကို တွေ့တော့ ရည်စားဘဝတုန်းက ဘယ်လိုများ ချစ်စကားပြောလာကြလည်းဆိုတာအရမ်းသိချင်မိတယ်။မိန်းခလေးဘက်ကလည်း ဘယ်လောက်ထိ အိုက်တင်ခံပြီးမှ အဖြေပေးသလဲဆိုတာသိချင်မိတယ်။
ကျွန်တော်တုန်းက ခက်ခက်ခဲခဲချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ရတယ်၊အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ဒီလိုခက်ခဲစွာရယူလာခဲ့ရတဲ့အချစ်ကို တန်ဖိုးထားတယ်၊မြတ်နိုးတယ်။
တကယ်တော့ လင်မယားဆိုတာ အရင်းနီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေလေ၊ထိလျှလွယ်တယ်။ရန်မဖြစ်မိအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးဖြေလျော့တတ်ရမယ်။
နားလည်မှုဆိုတာ ဆင်းရဲတာ၊ချမ်းသာတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။နောက်တစ်ချက်က ငါဆိုတဲ့ အတ္တစွဲတွလျော့ချပစ်ရမယ်။
လူပဲအခန့်မသင့်ရင် စိတ်တော့တိုတတ်ကြတာပေါ့။စိတ်တိုတိုင်းလည်းပေါက်ကွဲပြစ်လို့မရဘူး၊ပေါက်ကွဲမှုပြင်းရင်ပြင်းသလို အပိုင်းအဆတွေက လွှင့်စင်ထွက်သွားတတ်ကြတယ်၊
နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့လွှင့်သွားတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာ အပိုင်းအဆတွေကိုပြန်ဆက်ရတာမလွယ်ဘူးလေ။ဒီတော့ ဒေါသရဲ့ပေါက်ကွဲမှုအားကို နည်းနိုင်သလောက်နည်းအောင် ပထမအဆင့်လျော့ချနိုင်ရမယ်။
မဖြစ်နိုင်တာမရှိပါဘူး၊ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ထစ်ကတည်းနေရင် ထွက်တတ်တဲ့ဒေါသအကျင့်ကလေးကို ဖြေးဖြေးချင်းလျော့ချကြည့်ပါ။လင်မယားတွေရန်ဖြစ်တာ နည်းလာလေ၊
ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ့်ကိုလေးစားအထင်ကြီးလာလေပါပဲ၊စိတ်ချမ်းသာမှုအမြဲရနေရင် အလုပ်လုပ်ရတာလည်း အဆင်ပြေလာမယ်၊စီးပွားလည်းသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ရန်မဖြစ်ကြဘူး။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖေးမကူညီတယ်။ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်မှုသာယာတယ်၊စီးပွားလည်းတက်တယ်ဆိုတာ နိဂုံး ချုပ်ပြောပြချင်ပါတယ်။